after pregnant – Healthy Life Journal
All posts tagged "after pregnant"
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် ဖောလိတ်ဓာတ်က ဘာကြောင့်အရေးကြီးတာလဲ …
—–၊ ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ၊—– Q. ကျွန်မကိုယ်ဝန်ဆောင်တော့ ဖောလိတ်ဓာတ်ပါတာစားဆိုပြီး ပြောကြလွန်းလို့ပါ။ ဖောလိတ်ဓာတ်က ဘာကြောင့် အရေးကြီးရတာလဲရှင့်။ A. ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ အရေးအကြီးဆုံးကတော့ ဖောလိတ်ပါ။ စားတဲ့အစားတွေမှာ ဖောလိတ်ဓာတ်ပါဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ အစားအစာဆိုရင်တော့ ဖောလိတ်ဓာတ်ပေါ့။...
သင့်အနေနဲ့ ကိုယ်ဝန်ရှိနေကြောင်း စောစောစီးစီး သိလေလေ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုကို အမြန်ဆုံးခံယူနိုင်လေလေ ဖြစ်မှာပါ။ ဒါကြောင့် ကိုယ်ဝန်ရှိနေတဲ့ အစောပိုင်းလက္ခဏာရပ်တွေကတော့ – ညောင်းညာခြင်း၊ ရင်သားတင်းခြင်း၊ စိတ်ခံစားမှုပိုင်း ပြောင်းလဲခြင်း၊ အထူးသဖြင့် ဝမ်းနည်းလွယ်လာခြင်း၊ ရာသီမလာတော့ခြင်း၊ ဖျားခြင်း၊ ပျို့ချင်အန်ချင်ဖြစ်ခြင်း စတဲ့...
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တိုင်း သိသင့်သည် ရက်ပေါင်းတစ်ထောင်
—–၊ ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ၊—– ကလေးငယ်တွေလိုအပ်တဲ့ အာဟာရရရှိမှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ အခုတလောမှာ The First 1000 Days ဆိုတဲ့ အစီအစဉ်တွေ အတော်လေး ခေတ်စားနေပါတယ်။ WHO- ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ ့အစည်းကလည်း ဒါကို အရမ်းအရေးကြီးတယ်လို့...
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်က ရင်သွေးကို ချောချောမောမောမွေးဖွားနိုင်ဖို့ အရေးကြီးသလား
—–၊ ဒေါက်တာစိုးလွင် (သားဖွားမီးယပ်အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ၊—– Q. ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တစ်ယောက်က ရင်သွေးကို ချောချောမောမော မွေးဖွားနိုင်ဖို့က အရေးကြီးပါသလား။ အဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆရာ့အတွေ့အကြုံလေးရှိရင်လည်း သိပါရစေ။ A. ကလေးတစ်ယောက် တဖြည်းဖြည်း ကြီးပြင်းလာပြီး အချိန်တန်အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါ ဘဝအဖော်ဆိုတာ လိုအပ်လာပါတယ်။ ကိုယ်နဲ့တစ်သက်လုံး...
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်တွင် ဆံကေသာနှင့် အသားအရေပြောင်းလဲမှု
———၊ ငွေကြယ်စင်ယံ ၊——— ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ အမျိုးသမီးတွေက အသားအရေကြည်လင်တောက်ပလာတယ်လို့ ထင်ရပေမယ့် ဆံကေသာနဲ့ အရေပြားမှာ မျှော်လင့်မထားတဲ့ သက်ရောက်မှုတွေ ရှိနေနိုင်ပါတယ်။ အသားအရောင်ရင့်လာခြင်း အရေပြားပေါ်က အပြောင်းအလဲဟာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလ သီတင်းပတ် ၂၀ လောက်အကြာမှာ စတင်သိသာလာပါတယ်။ သင့်အသားအရေက ညိုလေလေ၊...
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် အားဆေးသောက်တဲ့အခါ . . .
—–၊ ဒေါက်တာစိုးလွင် (သားဖွားမီးယပ်အထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ၊—– Q. ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အားဆေးကို တချို့က ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ် ကိုယ်ဝန်ရှိပြီဆိုတာနဲ့ သောက်ကြတယ်။ တချို့ကျတော့ အိုဂျီနဲ့အပ်ပြီးမှ သောက်ကြပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အားဆေးကို ကိုယ်ဝန်ဘယ်နှလမှာစပြီး သောက်တာအကောင်းဆုံးပါလဲ ဆရာ။ A. ကိုယ်ဝန်ဆောင်အားဆေးဆိုပြီး ဆေးတွေကတော့ အများကြီးပေါ်နေတာပေါ့လေ။...
—–၊ ဒေါက်တာစိုးလွင် (သားဖွားမီးယပ်အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ၊—– Q. ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ဗိုက်ကြောပြတ်တာက စိုးရိမ်ရပါသလားဆရာ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ဗိုက်ကြောပြတ်ရတာက ဗိုက်ထဲက ကလေးဆံပင်ပေါက်လို့၊ ဦးခေါင်းယားလို့၊ ကုတ်လို့ ဖြစ်ရတယ်လို့ တချို့ က ဆိုကြပါတယ်။ မှန်ပါသလားဆရာ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ဘာကြောင့်...